Khabiirka Cilmi-baarista ayaa qeexaya Sababta Sababta Maxay tahay inaanu Isticmaalin Liiska Ka-reebista Tixraaca Si Looga Hadlaado Spam
Dad badan ayaa isku dayaya inay ka takhalusaan spam gudbinta ee Google Analytics. Sababta ayaa ah in ay horseed u tahay warbixinno khafiif ah oo wax ka beddeli kara sida milkiilayaasha bogagga ay go'aanno uga gaareen ololaha suuqgeynta. Liisaska ka-reebitaanka loo gudbiyo waa hal waddo oo arrintaan laga hadlo. Si kastaba ha noqotee, sida ugu habboon, ayaa khubaradu waxay rumaysan yihiin in ay tahay fikrad aad u xun. Inkastoo ay dadku sii wadi doonaan inay sheegtaan inta ay fikrad xun xun tahay, taasi cidna weligeed ma qaadatay fursad ay ku sharaxdo sababta sababta - lincoln casino code.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijitaalka ah, ayaa isku dayaya in uu sharaxaad ka bixiyo.
Waxaa jira qoraallo badan oo ku saabsan sida ay tahay in uu ka tago spam gudbinta. Si kastaba ha noqotee, waxa kaliya oo aan diirada saareynaa sababta ay tahay inaanu u isticmaalin liistada ka-saarida liiska. Google wuxuu kaydiyaa isticmaalka liiska si looga reebo wixii taraafik ah ee ka imaanaya baabuurta iibsiga ee saddexaad. Sidan oo kale, Google Analytics waxay ka hortagtaa tirinta macaamiisha xisadaha cusub iyadoo loo marayo tixraac iyo soo celinta iibsashada. Waxay dhacdaa marka macmiilku hubiyo bogga sadexaad ee dhinacyada oo ku soo noqo bogga dib u xaqiijinta amar dambe.
Qeexitaanka sahlan ee Google laga yaabo in uu keeno khalal khaldan oo dadwaynaha. Ereyada sheegaysa in markaad ka tagto ilo gudbin, dhammaan taraafikada ka imaanaya domainkaas mamnuucaya inaysan kicin fadhiga cusub, waxay isku halleeyaan dad badan..
Dadku waxay u maleynayaan in ka-reebitaankani macnaheedu yahay in Google Analytics uusan ku jirin booqashada warbixinta. Sida caadiga ah ma aha kiiska. Maxaa ku dhacaya waa Google in uu isku dayo inuu booqasho ku yimaado booqasho asal ah oo ku socda websaydhka. Taas waxaa dheer, waxay ka hortagtaa aqoonsiga wixii macluumaad ah ee gudbinta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira booqasho muuqata, oo kaliya maahan wax ilo ah
Halkan waa muujin ah waxa tani macnaheedu yahay:
Hal bog website stackoverflow.com wuxuu leeyahay link to site ah mid gaar ah. Haddii qofku soo booqdo bogga "cidlo cidlo ah" waxay kuusoo xariirtaa xiriirka ama domainka, waxay u muuqataa in loo diro StackOverflow Google Analytics.
Tusmada guud ee muuqaalka, waxay akhrinaysaa in ay jiraan hal user ah oo firfircoon goobta, ka soo xigtay StackOverview ee gaadiidka ugu sareeya bulshada. Hadda, haddii qofku go'aansado inuu ku daro domain cusub liisaska ka-saaris liiska, oo guji xidhiidh isku mid ah, laakiin ka socda barta kale duwan, Google Analytics ayaa weli qoraya booqashada. Caadi ahaan, liiska ka-reebitaanku wuxuu hayaa dhammaan saamiyada ku jira liiska. Sida laga soo xigtay Google Analytics, sida laga soo xigtay, waxa laga helayaa barta intarnetka cusub, oo kicinaysa cashar cusub, oo wax ka qabta ficil ahaan sidii ay ahayd adeeg cusub. Sidaa daraadeed, falanqeyntu waxay ula dhaqantaa si toos ah booqasho maadaama aysan ku jirin macluumaadka gudbinta.
Haddii mid ka mid ah xariirka spammy iyo domains badan oo liisaska liisaska loo diro, waxay ka hortagi karaan milkiilaha bogga waxayna u leexinayaan gaadiidka tooska ah. Sidaa daraadeed, mid ayaa dhameystiraya ujeedka udubdhexaadinta gudbinta ee ka soo baxday warbixinta Google Analytics, iyo meeshii, si toos ah ugudbinta taraafikada. Si kastaba ha noqotee, mareegaha boggaga ayaa wali ka maqnaan doona.
Haddii gudbinta spam noqoto khatar, u tixraac inaadan isticmaalin liistada ka-reebitaanka gudbinta si aad uga takhalustid.